> Resource > Samsung > 2 Easy Siyaabaha kaabta Galaxy Nexus
Maxaad u baahan tahay in gurmad Samsung Galaxy Nexus?
The Samsung Galaxy Nexus waa horeysay casriga socda 4.0.0 Android, sii daayay bishii October, 2011. Haddii lagu isticmaalayn Android casriga ah in muddo ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahan gurmad hadda. U baahan gurmad waxaa laga yaabaa in ay gacan ka sababo badan:
Ma waxaa loo isticmaalaa muddo dheer iyo wax badan oo data badbaadiyey. Sidaa awgeed aad rabto in aad iyaga gurmad haddii khasaare xogta shil.
Waxaa la go'aamiyey in la rujin aad Galaxy Nexus xuquuqda dheeraad ah, si aad u doonayaan inay gurmad ah marka hore.
La soo iibiyo ama ka iibsan doonaa Android casriga ah, iPhone ama Nokia phone cusub, laakiin ma doonayo in aan iska xog ku saabsan Galaxy Nexus. Sidaas darteed, aad rabto in aad xog gurmad iyo wareejiyo telefoonka cusub.
Samsung Nexus egyahay meel bannaan, si aad u jeclaan lahaa in aan xog gurmad oo markaas iyaga tirtirto ka Samsung Nexus.
Sida loo gurmad Galaxy Nexus?
Waa wax sahlan in gurmad Galaxy Nexus, iyadoo aan loo eegayn haddii uu xidid ama aan. Waxaan halkaan u joogaa inaan idin ​​tusin laba qalab dhinac saddexaad oo awood badan. Mid ka mid ah waa tababare xogta Android - ka Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) , kan kale waa phone hal-click in qalab phone xogta kala iibsiga magacaabay ah Wondershare MobileTrans . In qayb hoose, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida loo isticmaalo si ay u sameeyaan gurmad Galaxy Nexus.
Talooyin ku taageerto kor u Galaxy Nexus in kombiyuutarka
The Wondershare MobileGo for Android waa qalab wax lagu maareeyo hal dukaan u isticmaala Android inay gurmad dhammaan xogta, oo ay ku jiraan app, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, music, videos, abuse wac, jadwalka taariikhda, playlist info iyo sawiro, ka Samsung Nexus in kombiyuutarka ku haboon oo ammaan ah. Iyadoo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) , waxaad samayn kartaa xiriirada gurmad, SMS, jadwalka, wac gasho oo Chine ka Nexus Galaxy si ay kombiyuutarka
Halkan, waxaan qaadan version Windows sida tusaale. Users Mac, fadlan qaado tallaabooyinka la mid ah. Download iyo rakibi version saxda ah ee kombiyuutarka. Waxa maamula. Kombiyuutarka Connect aad Nexus Galaxy wirelessly ama la cable USB ah. (La xidhiidha WiFi helaa oo keliya version Windows.)
Fiiro gaar ah: Download iyo rakibi app MobileGo on your computer, haddii ay markii ugu horeysay si aad u sameeyo xiriir via WiFi.
In uu furmo suuqa hoose, guji One-Guji Copy , badhanka ku yaal Tools aad jeceshahay waxaa laga yaabaa. Wada hadal A booda, kuu sheega waxa ku jira ee aad u awoodo gurmad. Hubi oo kaliya waxyaabaha aad doonayso inaad guji Back Up in gurmad Galaxy Nexus in PC.
Talooyin ku saabsan gurmad Samsung Galaxy Nexus iyo badbaadin telefoonka ah
Marka ay timaado in ay taageerto kor u Samsung Galaxy Nexus in telefoonka ah oo ay ku jiraan iPhone, smartphone Android ama Nokia, ee Wondershare MobileTrans si weyn lagu talinayaa. Loo arkaa qalab kala iibsiga telefoonka lagu kalsoonaan karo oo awood leh, Wondershare MobileTrans aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan xiriirada, SMS, music, videos iyo sawiro si iPhone, iyo in ka badan si ay u phone kale Android, oo nuqul ka xiriirada si Nokia (Symbian) telefoonka ah.
Download qalab ku PC Windows ah oo ku xidh. Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan aad Samsung Galaxy Nexus iyo telefoon kale oo soo ordaya macruufka, Android oo Symbian in kombuutarka.
Ka dib markii la ogaado, labada telefoonada waxaa lagu muujiyey in uu furmo suuqa hoose. Dhexdoodana jira faylasha. Dhammaan files ee loo ogol yahay in lagu wareejiyo waa la saxay. Riix Start Copy in ay bilaabaan in ay gurmad Samsung Nexus telefoon.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaad samayn kartaa ka fiiri Apple qalab ay taageerayaan, qalabka Android iyo qalabka Nokia .
Sidee si ay u gudbiyaan Music / heeso ka Lugood in Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4
Sida loo dayactir casriga Battery Dhibaatooyinka Isticmaalka The Manager Samsung Battery
Samsung Kies Download: Version kasta oo aad u baahan tahay!
3 Hababka loo sameeyo ee kaabta Samsung SMS Si fudud